Dynamic Auto Resistance Support Inkomba ye-MT5
Ikhaya Forex MT5 Izinkomba Dynamic Auto Resistance Support Inkomba ye-MT5
Isingeniso ku-Dynamic Auto Resistance Support Indicator
1 Isingeniso ku-Dynamic Auto Resistance Support Indicator
2 Siyini Isikhombi Sokuxhaswa KweDynamic Auto Resistance?
3 Isebenza kanjani Inkomba Yesikhangiso Sokuxhasa Okumelana Namandla?
4 Ungasisebenzisa kanjani i-Dynamic Auto Resistance Support Indicator ye-MT5?
Amabanga ezimakethe ngokuvamile anezindawo zokusekela nezokumelana. Lezi yizindawo lapho intengo ivame ukwehla kusuka noma kunini lapho imakethe ihlonipha ibanga lentengo. Le ngenye yezindlela ezaziwa kakhulu abathengisi abathengisa ngazo imakethe. Nokho, kudinga ikhono ukukhomba kahle lezi zindawo nobubanzi.
Isibonisi seDynamic Auto Resistance Support iyithuluzi elingasiza abathengisi ukukhomba ngokuqonde okunjalo ukwesekwa noma izindawo zokumelana.
Siyini Isikhombi Sokuxhaswa KweDynamic Auto Resistance?
Isikhombi se-Dynamic Auto Resistance Support siyinkomba yezobuchwepheshe yangokwezifiso ekhomba ngokuzenzakalela izindawo zokuxhasa nezokumelana futhi ikhombise amazinga okusekela nawokumelana ngokuya ngezindawo ezitholile.
Le nkomba ingasetshenziselwa ukuthola amazinga osekelo nawokumelana kunoma iyiphi imakethe yamathuluzi ethengiswayo noma ngasiphi isikhathi.
Isebenza kanjani Inkomba Yesikhangiso Sokuxhasa Okumelana Namandla?
Le nkomba ithola izindawo zokusekelwa nokumelana ngokususelwa kokuphakeme nokwehla kwebanga lemakethe. Ukwenza lokhu kucatshangelwa intengo ejwayelekile yamakhandlela ngaphakathi kwebanga, kanye nenombolo yamakhandlela noma izinkathi ezimbozwe ibanga ngaphambi kokuthi liqale ukufuna elinye ibanga lentengo noma indawo. Bese uhlela umugqa ekugcineni okuphezulu kwebanga okungaba ukumelana nakho, nomunye umugqa ekugcineni okungezansi kwebanga okuzoba ukusekelwa. Le migqa ayikho ekuphakameni ngqo naphansi kwezinga lobubanzi kepha ingaphakathi kwebanga lapho intengo ivame ukubuyela emuva njengoba inyuka ngaphakathi kwebanga.
Esikhathini sesikhathi sisetshenziswa ku-, kungabonakala njengobubanzi obujwayelekile lapho intengo ibizonyuka iye phezulu nangaphansi. Nokho, ngezikhathi ezibekiwe eziphakeme, kungabonakala sengathi yindawo yokuminyana emakethe lapho intengo ingaqhamuka khona.
Ngezansi ukuqhathaniswa kweshadi lehora eli-1 nesibonisi seDynamic Auto Resistance Support, futhi ishadi lansuku zonke elinezindawo ezinomthunzi ophuzi. Lapha uzobona ukuthi izingxenye eziseshadini lehora eli-1 ziyizindawo zokuminyana eshadini lansuku zonke.
Ungasisebenzisa kanjani i-Dynamic Auto Resistance Support Indicator ye-MT5?
Njengasezinsizakalweni zokweseka nezokumelana ngokususelwa kumabanga entengo noma izindawo, kunezimo ezimbalwa ezingase zenzeke ezingathathwa njengokusetha kokuhweba okuvumelekile. Intengo ingahle ibuyele emuva futhi igxume iye kolunye uhlangothi noma iphume ngomfutho oqinile ize iqale ukudala enye indawo.
Kanjalo, abathengisi bangahlehlehlisela ukuhweba ngokwenqatshwa kwentengo okwenzeka kulayini wokusekelwa noma wokumelana noma ukuphuma kwamandla okuhweba okuvela emazingeni entengo ashiwo.
Bheka intengo njengoba kuthinta ulayini wokusekela. Faka i-oda lokuthenga ngokushesha nje lapho ifomu lephethini lesibani se-bullish. Setha ukulahleka kokuma ngaphansi kwephethini.
Setha umgomo wokuthatha inzuzo kulayini wokumelana.
Bheka intengo njengoba kuthinta umugqa wokumelana. Faka i-oda ethengisa ngokushesha ifomu iphethini lwezibani ze-bearish. Setha ukulahleka kokuma ngaphezu kwephethini.
Setha umgomo wokuthatha inzuzo kulayini wokusekela.
Isibonisi seDynamic Auto Resistance Support sinikela ngento eyodwa ebalulekile lapho ukuhweba kuguquka nokuphuma ngokuya ngamanani entengo. Nokho, akuyona inkomba ezimele ngoba ayibonisi ukuthi uzongena nini futhi uphume nini emisebenzini. Njengoba abathengisi abanjalo kufanele bafunde ukuthi bangakhomba kanjani ngokungenaphutha ukuthi kufanele bangene nini futhi baphume kanjani emisebenzini ngokuya ngesenzo sentengo.
Isikhombi Sokuxhaswa KweDynamic Auto Resistance ye-MT5 yiMetatrader 5 (MT5) inkomba kanye nengqikithi yale nkomba yezobuchwepheshe ukuguqula idatha yomlando onqwabelene.
Isikhombi Sokuxhaswa Kwe-Dynamic Auto Resistance ye-MT5 sinikeza ithuba lokuthola izici ezihlukile namaphethini kumanani entengo angabonakali ngeso lenyama..
Indlela yokufaka i-Dynamic Auto Resistance Support Indicator ye-MT5.mq5 ku-MetaTrader yakho 5 Ishadi?
Landa i-Dynamic Auto Resistance Support Indicator ye-MT5.mq5
Kopisha iDynamic Auto Resistance Support Indicator ye-MT5.mq5 ku-Metatrader yakho 5 Directory / ochwepheshe / izinkomba /
Qhafaza kwesokudla ku-Dynamic Auto Resistance Support Indicator ye-MT5.mq5
Inkomba Dynamic Auto Resistance Support Indicator ye MT5.mq4 itholakala ku Ishadi yakho
Ungasusa kanjani i-Dynamic Auto Resistance Support Indicator ye-MT5.mq5 kwi-Metatrader yakho 5 Ishadi?
Dynamic Auto Resistance Support Inkomba ye-MT5 (U-downloader mahhala)
Isiqephu esedluleInkomba ye-SSL ye-MT4
Isiqephu esilandelayoDirectional Tenkan Cross Forex Trading Strategy